You searched for सीजी नेट - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेसन्सले गत सातादेखि इन्टरनेट सेवा ‘सीजी नेट’ ल्याएकाे छ । हाल काठमाडाैं उपत्यकाका सीमित ठाउँमा यसकाे सेवा उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार हाल जावलाखेल, लगनखेल, महालक्ष्मीस्थान, एकान्तकुना,
Published On : 8 June, 2021
काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेसन्सले आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवाभन्दा आधा सस्तो मूल्यमा ‘सीजी नेट’ ल्याएको हो । उच्च गतिको इन्टरनेट
इन्टरनेट दिन सीजीको पूर्वाधार तयार, निषेधाज्ञा बीचमै सेवा सञ्चालनको तयारी
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले उच्च गतिको एफटीटीएच इन्टरनेट सेवा दिन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम पुरा गरेको छ । कोभिड महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञा बीचमै कम्पनीले आवश्यक काम
अन्य सेवा प्रदायकको ट्रोल बनाउँदै सीजी टेलिकम, के इन्टरनेट दिने अन्तिम तयारी हो ? (समाचार हटाइएको)
असावधानीवश यो समाचार प्रकाशन भएकोमा क्षमा माग्दै हटाएको जानकारी गराउँछौं । – सम्पादक
Published On : 26 April, 2021
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले आउँदो वैशाखभित्रै इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी थालेकाे छ । कम्पनीले आक्रामक रुपमा बजारमा उपस्थिति जनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडाैंबाट एफटीटीएच इन्टरनेट सेवा
Published On :9April, 2021
आक्रामक योजनाका साथ इन्टरनेट सेवा सुरु गर्दै सीजी टेलिकम
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले आक्रामक रुपमा बजारमा उपस्थिति जनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको हो ।
Published On : 14 March, 2021
मोल्दोभाका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्मार्टफोन र इन्टरनेट दिँदै सीजी
काठमाडौं । नेपालको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको दूरसञ्चार कम्पनी मोल्डसेलले मोल्दोभाका ज्येष्ठनागरिकलाई निःशुल्क रुपमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट वितरण गर्न थालेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोषसँगको सहकार्यमा नेपालका एकमात्र अर्बपति
Published On :6February, 2021
एमआईएसमा समेटियो सिजी नेट, कति पुगे ग्राहक ?
काठमाडौं । सिजी नेटको ग्राहक सङ्ख्या नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस (म्यानेज्ड इन्फरमेसन सिस्टम) मा समेटिन थालेको छ । गत जेठ १८ गतेदेखि राजधानीबाट सुरु भएको कम्पनीको असार मसान्तसम्मको ग्राहक
Published On : 12 September, 2021
मेश वाई-फाईसँगै वर्ल्डलिङ्कले ल्यायो ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट
काठमाडौं । नेपालकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले अहिलेसम्मकै फास्ट इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सोमबार नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ प्रविधि मेश वाई-फाईसँगै ३०० एमबीपीएसको इन्टरनेट
Published On :6September, 2021
सिजी नेटको पहिलो सेवा विस्तार, अब थप यी ६ ठाउँमा उपलब्ध
काठमाडौं । अत्यन्त सस्तो मूल्यमा १२० एमबीपीएसको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने घोषणासहित बजार प्रवेश गरेको सिजी नेटले पहिलोपटक आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । यसअघि सेवा सुरु गर्दा ललितपुरका जावलाखेल, झम्सिखेलजस्ता
सीजी टेलिकमलाई किन दिइएन लाइसेन्स ?
सन् २०१२ मा हामीले एसटीएम किन्यौं । कुनै कम्पनी खरिद गर्दा त्यसको बक्यौता र दायीत्वका कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो दायीत्व पुरा
Published On : 25 May, 2021
सस्तो मूल्यमा गाउँगाउँसम्म हाई स्पिड इन्टरनेट पुर्‍याउने चौधरी ग्रुपको घोषणा
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले देशका ग्रामीण क्षेत्रसम्म हाई स्पिड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । टेकपानाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलाको कार्यक्रममा बोल्दै सीजी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक